I-substrate ye-alumina ceramic - XTL
I-substrate ye-alumina ceramic
Usendaweni efanele ye- I-substrate ye-alumina ceramic.Okwamanje usuyakwazi lokho, noma ngabe yini oyifunayo, uqinisekile ukuthi uyokuthola kuvuliwe XTL.siqinisekisa ukuthi kulapha XTL.
Lo mkhiqizo umelana kakhulu nomswakama. Izingxenye zalo mkhiqizo azifani nomphumela wamanzi ozobangela ukugqwala nokubunjwa..
Sihlose ukunikeza ikhwalithi ephezulu kakhulu I-substrate ye-alumina ceramic.kumakhasimende ethu wesikhathi eside futhi sizobambisana namakhasimende ethu ngokunikela ngezixazululo ezisebenzayo nezinzuzo zezindleko.
95% 99% Umkhiqizi wepuleti le-Alumina ceramic substrate-XTL
Izitsha ze-alumina ze-ceramic ziyizinto zobumba ezisezingeni eliphakeme ezakhiwe ngokuyinhloko nge-aluminium nomoya-mpilo. Baziwa kakhulu ngokuba phakathi kwezinto ezinhle kakhulu nezisetshenziswa kakhulu ze-ceramic zamapuleti ezimbonini eziningi. Abakhiqizi abaningi bakhetha amapuleti e-alumina ceramic ngezizathu ezimbalwa, okuhlanganisa ukushisa okuhle kakhulu, amandla okuvikela, ukumelana nokugqwala, indawo ephezulu yokuncibilika, nobulukhuni obukhulu.